Hairstyle | YUYU BEAUTY - Part 152
You are at:Home»Category: "Hairstyle" (Page 152)
ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ငါးမြှီးရိုး ကျစ်ဆံမြှီး
ကျစ်ဆံမြှီးကျစ်ရတာကို ကြိုက်သော ပျိုမေတို့ အတွက် ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်နော်! 1.ဆံပင်နှစ်ဖက်ကို ခွဲပါ။ ဆံပင် နှစ်ဖက်ကို အလယ်မှ…
သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အပြင်ထွက်လိုသော ပျိုမေတို့်အတွက် ဘီးဆံထုံးပုံစံလေး။
ပျိုမေတို့အတွက် ခေါင်းစည်းကြိုး အ၀ိုင်းပုံစံ ပစ္စည်းလေးနဲ့ ဆံထုံးထုံးတဲ့ပုံစံလေးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်! 1.ဆံပင်အားလုံးကိုစုစည်းလိုက်ကြရအောင်။ Hairoilလေးသုံးပြီးစည်းရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ပျိုမေတို့။ 2.ခေါင်းစည်းကြိုးအ၀ိုင်းလေးကို သုံးကြည့်ရအောင်! အ၀ိုင်းလေးကို…
ချစ်စရာကောင်းသော ကွင်းဆက်ရေတံခွန်	ဆံပင်ပုံစံ
ပျိုမေတို့အတွက် ချစ်စရာကောင်းပြီး လူတိုင်းငေးကြည့်ချင်စရာ ကောင်းတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လေးကို ဖန်တီးပေးလုိုက်တယ်နော်။ 1.အရင်ဆုံး ဆံပင်များကို သေသပ်စွာဖီးပြီး ဖြန့်ချထားပါ။…
အမြဲတမ်း ဖော်ပြပေးနေကျ ကျစ်ဆံမြီးပုံစံနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့Hair Style!
အားလုံးဘဲလုပ်နေကျကျစ်ဆံမြီးလေးကိုဘဲ အနည်းငယ်ကွဲပြားစွာလုပ်ကြည့်ရအောင်! အခုချိန်အထိ သုံးပင်ကျစ်ဆံမြီးကိုအသုံးပြု၍ လွယ်ကူတဲ့ကျစ်ဆံမြီးလေးကို မှတ်သားထားပါနော်။ 1.ခေါင်းအပေါ်မှစတင်၍ ဆံပင်များကိုအနည်းငယ်ယူပြီးကျစ်ပါ။ 2.ဆံပင်ကိုသုံးခုခွဲပါ။ 3.ဘယ်…
အလုပ်ကို အချိန်မှီသွားရသောပျိုမေတို့ အတွက် သွားလာရင်း နှင့် ထုံးလို့ရသော မြင်းမြှီးဆံထုံး
ဆံပင်စည်းရတာကိုကြိုက်သောပျိုမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားသောလွယ်ကူရိုးရှင်းသောဆံထုံးလေးပါ! 1.သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဖြစ်အောင် အရင်ဆုံး ဖြီးပါနော်။ ဆံပင်ကိုတစ်ဝက်အရင်သိမ်းပြီး သားရေကွင်းနှင့်ချီပါ။…
ငယ်ရွယ်ပီးချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လပ်တဲ့အလှတရားကို ပုံပေါ်စေမယ့် Hair Style 1.ဆံပင်များကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖီး၍ချထားပါ။ 2.ဘယ်ဘက်မှစ၍ ဆံပင်ကိုအလယ်မှ အနည်းငယ်ယူပါ။…
သုံးပင်ကျစ် ကျစ်ဆံမြီးလေးဖြင့် ပန်းပွင့်ပုံစံလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်!
အမျိုးမျိုးသော ညစာစားပွဲများသွားရန် Hair Styleအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး လှပတဲ့ပုံစံလေး…. အားလုံးနဲ့တူမယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ကွဲပြားတဲ့ ပုံစံလေး….…
​သေ​ရေကွင်းတစ်​ခုတည်းနဲ့ အလွယ်​တကူလုပ်​လို့ရတဲ့ hair style
ဆံပင်​တို့တဲ့သူ​တွေနဲ့​ရော ဆံပင်​ရှည်​​တဲ့သူ​တွေနဲ့ပါ အဆင်​​ပြေတဲ့ hair style. ခက်​ခဲတဲ့ကျစ်​ဆံမြီး မဟုတ်​လို့ ၃မိနစ်​​လောက်​နဲ့ လုပ်​လို့ရမယ့်​ပုံစံ​လေးပါ။ မိန်းက​လေးဆန်​ဆန်​ချစ်​ဖို့​ကောင်းတဲ့…
အရေးကြီးတဲ့ပွဲနဲ့ အခမ်းနားတွေအတွက် အရမ်းလှတဲ့အ၀တ်စားကို မရှုံးနိမ့်မယ့် လှပတဲ့ဆံပင်ပုံစံလေး
အရေးကြီးတဲ့နေ့ရက်များအတွက် လှပတဲ့Hair Styleလေး လုပ်ကြည့်ချင်သူများအတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့အမြင်မှာ လှပတင့်တယ်တဲ့ Hair Styleလေးဆိုလဲ မမှားနိုင်ပါဘူး။…
တစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဖဲပြားပုံHair Styleရဲ့ ပြုလုပ်ပုံနည်းလမ်း!
ကိုယ့်ဆံလေးကို ဖဲပြားပုံစံလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ရင် တော်တော်လေးလှမှာပါ။ အမေရိကားမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Hair Style! အားလပ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အလည်အပတ်သွားရန်…